Mercaptopurine (မာကပ်တိုပျူရင်း) : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Mercaptopurine (မာကပ်တိုပျူရင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Mercaptopurine ကို တခြားဆေးများနှင့်တွဲ၍ တစ်ချို့သောကင်ဆာများ (ဥပမာ acute lymphocytic leukemia) အားကုသရာတွင် အများဆုံးအသုံးပြု၏။ ၎င်းမှာကင်ဆာကုထုံးဆေးဖြစ်ပြီး ကင်ဆာဆဲလ်များ ကြီးထွားခြင်းကို တားခြင်း၊ နှေးစေခြင်းဖြင့် အာနိသင်ပြပါသည်။
Mercaptopurine ၏ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများကို ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ အထူးသဖြင့် ကလေးများနှင့် ငယ်ရွယ်သူများ။
Mercaptopurine (မာကပ်တိုပျူရင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဤဆေးကို အစာနှင့်တွဲပြီးသောက်နိုင်သလို အစာမပါပဲလည်းသောက်နိုင်ပါသည်။ များသောအားဖြင့် တစ်ရက်လျှင်တစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်မှတခြားဘာမှမပြောလျှင် ဆေးသောက်သည့်အခါရေများများနှင့်သောက်ပါ။ ထို့သိုသောက်ခြင်းက တစ်ချို့သောဆိုးကျိုးများကို လျော့ပါးစေနိုင်ပါသည်။ (ကျောက်ကပ်ပြဿနာများ)
ဆေးအရည်ကိုသုံးမည်ဆိုပါက ဆေးသောက်တိုင်း ပုလင်းကို စက္ကန့် ၃၀ ခန့် လှုပ်ပေးပါ။ ဆေးချိန်တွယ်သည့်ကိရိယာနှင့် သေသေချာချာချိန်ပါ။ အိမ်သုံးထမင်းစားဇွန်းကိုသုံးပါက မှန်ကန်သောပမာဏ မရနိုင်ပါ။ ဆေးအရည်ကို မျက်လုံးထဲမဝင်အောင်၊ အရေပြားပေါ်မကျအောင် ရှောင်ပါ။ ဝင်သွား ကျသွားပါက ထိမိသည့်နေရာကိုရေပေါပေါနှင့် ဆေးကြောပစ်ရမည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
ညွှန်ကြားထားသော ပမာဏ၊ အချိန်ကာလထက် တိုးသုံးစွဲခြင်းမျိုးမလုပ်ရပါ။ အခြေအနေမြန်မြန် သက်သာမလာပဲ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်ချေသာ ပိုများလာပါလိမ့်မည်။
ဆေးမှအကောင်းဆုံးအာနိသင်ရစေရန်အတွက် မှန်မှန်သောက်ပါ။ ဆေးသောက်ဖို့မှတ်မိနေစေရန် နေ့စဉ်တူညီသောအချိန်တွင်သာ သောက်ပါ။
ဆေးကို အရေပြား၊ အဆုတ်တို့မှတစ်ဆင့် စုပ်ယူနိုင်သောကြောင့် မမွေးသေးသောကလေးကို အန္တရာယ်ပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မည့်သူများ ဤဆေးကိုကိုင်တွင်ခြင်း၊ ရှူခြင်းများမပြုလုပ်ရပါ။
Mercaptopurine (မာကပ်တိုပျူရင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Mercaptopurine ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းမှုများ မဖြစ်စေရန် Mercaptopurine ကို ရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Mercaptopurine ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ ကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသောပုံစံ ကွဲပြားခြားနားမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသော သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်းခြင်းကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။
Mercaptopurine အားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအား မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Mercaptopurine (မာကပ်တိုပျူရင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Mercaptopurineကိုမသုံးခင် ဤဆေးနှင့်ရော တခြား chlorambucilနှင့်ရော ဓါတ်မတည့်မှု ရှိပါက ဆရာဝန်ကိုကြိုပြောပါ။ ဤဆေးတွင် သင့်နှင့်ဓါတ်မတည့်နိုင်သည့် inactive ဓါတ်ပစ္စည်းများ ပါနေနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
ဤဆေးကိုမသုံးခင် သင့်ကျန်းမာရေးရာဇဝင်များကို ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်အား ပြောပြပေးပါ။ အထူးသဖြင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အသည်းရောဂါ၊ ကင်ဆာ၊ တစ်ချို့သော အင်ဇိုင်းရောဂါများ (TPMT deficiency)။
Mercaptopurine သည် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း ပိုဖြစ်စေနိုင်၏။ သို့မဟုတ် ရှိနေသော ကူးစက်ရောဂါကို ပိုဆိုးစေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တခြားသူများသို့ ပျံ့နှံ့နိုင်သည့်ရောဂါရှိသူများ (ရေကျောက်၊ ဝက်သက်၊ တုပ်ကွေး)ကို ရှောင်ရပါမည်။ ရောဂါပိုးနှင့် ထိတွေ့မိသည်ထင်ပါက သို့မဟုတ် အသေးစိတ် သိလိုပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။ လတ်တလောကမှ အသက်ရှိကာကွယ်ဆေးယူထားသူများ (ဥပမာ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကို နှာခေါင်းမှရှူထားခြင်း)နှင့် ထိတွေ့ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
ပြတ်ရှခြင်း၊ အညိုအမည်းစွဲခြင်း၊ ထိခိုက်မိခြင်းများ မဖြစ်ရအောင် မုတ်ဆိတ်ဓါး၊ လက်သည်းညှပ်တို့လို ချွန်ထက်သည့်ကိရိယာများအား သတိနှင့်သုံးပါ။ ထိတွေ့မှုများသော အားကစားများကိုရှောင်ပါ။
ဆေးကြောင့် နေရောင်မခံနိုင်ခြင်းဖြစ်တတ်၏။ နေနှင့်ထိတွေ့မှုကို ကန့်သတ်ပါ။ နေပူဆာလှုံခြင်း၊ နေကဲ့သို့မီးအိမ်အောင်တွင်နေခြင်းများကိုရှောင်ပါ။ အပြင်ထွက်ရမည်ဆိုပါက နေရောင်ခံလိမ်းဆေးများ လိမ်းခြင်း၊ အကာကွယ်ပေးအဝတ်အစားများဝတ်ခြင်း ပြုလုပ်ပါ။ နေလောင်ခြင်း၊ အရေပြားတွင် အဖုများထခြင်း၊ နီခြင်းများဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းပြောပါ။
သင့်တွင်ကိုယ်ဝန်ရှိလျှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်ရှိလျှင် ဆရာဝန်ကို ပြောပါ။ Mercaptopurine သောက်နေစဉ် ကိုယ်ဝန်ရသွား၍မဖြစ်ပါ။ Mercaptopurine သည် မမွေးသေးသောကလေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန် ပထမ ၃ လအတွင်း သောက်မိလျှင်။ ဆေးကိုသုံးနေစဉ် သင့်တော်သော သန္ဓေတားနည်းများကို မေးပါ။ ဆေး၏ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးမျာကို ဆရာဝန်နှင့်သေချာဆွေးနွေးပါ။
ဆေးသည် နို့ရည်ထဲသို့ဖြတ်နိုင်မဖြတ်နိုင် မသိရသေးပါ။ နို့မတိုက်ခင် ဆရာဝန်နှင့်အရင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Mercaptopurine (မာကပ်တိုပျူရင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များ မရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် D ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
Mercaptopurine (မာကပ်တိုပျူရင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့် အစားအသောက်ပျက်ခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ခဏတာ ဆံပင်ကျွတ်တတ်ပါသည်။ ထိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ပျောက်မသွားလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကို ချက်ချင်းပြောပါ။
ဤဆေးကြောင့် ပြင်းထန်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ သို့သော် ဤဆေးကို ဆရာဝန်မှပေးခြင်းသည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးထက် အကျိုးကျေးဇူးက ပိုများသောကြောင့် ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိထားပါ။ ဆရာဝန်နှင့်သေချာစောင့်ကြည့်ခြင်းက အန္တရာယ်ကိုလျော့ချပေးနိုင်ပါသည်။
ပင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သည့် အဆစ်ရောင်ခြင်းနာခြင်း၊ အမည်းရောင်ဝမ်းသွားခြင်း၊ ကော်ဖီရောင်များအန်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်လက္ခဏာများ (ဆီးပမာဏပြောင်းသွားခြင်း၊ ခါးအောက်ပိုင်းနာခြင်း) များဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းပြောပါ။
ပြင်းထန်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သော အသည်းရောဂါလက္ခဏာများ (ဥပမာ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်းမှာ မရပ်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ အရေပြားနှင့် မျက်လုံးများဝါခြင်း၊ ဆီးရောင်ရင့်ခြင်း) ဖြစ်လာပါက ဆေးကုသမှု ချက်ချင်းခံယူရမည်။
ဤဆေးသည် ရိုးတွင်းချဉ်ဆီလုပ်ငန်းစဉ်အား လျော့ကျစေသောကြောင့် သွေးနီဥ၊ သွေးဖြူဥနှင့် သွေးမွှားဥများ အရေအတွက် နည်းသွားစေနိုင်၏။ ထို့ကြောင့် သွေးအားနည်းခြင်း၊ ခန္ဓါကိုယ်၏ ရောဂါပိုးများတိုက်ထုတ်နိုင်စွမ်းကျခြင်း၊ သွေးယိုလွယ်ခြင်း၊ အညိုကွက်ထလွယ်ခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါလက္ခဏာများဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းပြောပါ။ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ မောပန်းနေခြင်း၊ အရေပြားဖျော့ခြင်း၊ ပိုးဝင်သည့်လက္ခဏာများ (ဥပမာ ပျောက်မသွားသော လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း)၊ အလွယ်အကူသွေးထွက်ခြင်း၊ အညိုအမည်းစွဲခြင်း။
Mercaptopurine သည် ရှားပါးစွားဖြင့် တစ်ချို့သောကင်ဆာများ (ဥပမာ လင်ဖိုးမား၊ အရေပြား၊ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာများ) ဖြစ်နိုင်ချေကို တိုးလာစေနိုင်ပါသည်။ တစ်ချို့သော အူလမ်းကြောင်းရောဂါများ (Crohn’s disease, ulcerative colitis) အတွက် ကုသနေရသော ကလေးနှင့် ငယ်ရွယ်သူများတွင် ပိုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဗိုက်ဖောခြင်း၊ ပြန်ရည်ကျိတ်များရောင်ခြင်း၊ ညအခါ ချွေးထွက်ခြင်း၊ အကြောင်းရင်းမရှိဝိတ်ကျခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ အရေပြားပြောင်းသွားခြင်း (ဥပမာ အသစ်သော အရေပြားအနာများ၊ အဖုများ၊ မှဲ့အရောင် အရွယ်အစားပြောင်းသွားခြင်း)၊ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ မိန်းမကိုယ်မှအရည်များဆင်းခြင်း၊ သွေးဆင်းခြင်း စသည့်လက္ခဏာများဖြစ်လာပါကလည်း ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းပြောပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Mercaptopurine (မာကပ်တိုပျူရင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Mercaptopurineနှင့်ဓါတ်ပြုနိုင်သော ဆေးကုန်များမှာ : febuxostat, ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို အားနည်းဆေးသောဆေးများ၊ ပိုးကူးစက်မှုဖြစ်နိုင်ချေ မြင့်စေသောဆေးများ (rituximab, tofacitinib)
ဤဆေးသည် တစ်ချို့သော ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းများကို အနှောက်အယှက်ပေးနိုင်၏။ (ဥပမာ Uric acid lvl) ထို့ကြောင့် အဖြေအမှားများထွက်နိုင်ပါသည်။ ဤဆေးသောက်နေကြောင်း ဓါတ်ခွဲခန်းဝန်ထမ်းများကိုသေချာပြောပြပါ။
Mercaptopurine သည် azathioprine နှင့် အတော်ဆင်တူပါသည်။ ထို့ကြောင့် azathioprine ပါသောဆေးများသုံးနေရပါက Mercaptopurine ကို သတိနှင့်သုံးပါ။
သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများ မဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်သည့်အခါ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Mercaptopurine (မာကပ်တိုပျူရင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Mercaptopurine က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Mercaptopurine (မာကပ်တိုပျူရင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Mercaptopurine သည် သင်၏ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Mercaptopurine (မာကပ်တိုပျူရင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Intestinal Arterial Insufficiency အတွက် လူကြီးသုံးရန် ပုံမှန်ပမာဏ
သောက်ဆေး: တစ်ရက်လျှင် 2.5 mg/kg နှုန်း (အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် 100 to 200 mg ခန့်ရှိသည်) ဤပမာဏအတိုင်း အပတ်ပေါင်းများစွာ နေ့စဉ်ပေးရပြီး တစ်ချို့လူနာများတွင် ပိုကြာနိုင်၏။ အကယ်၍ ၄ ပတ်မြောက်ပြီးသော်လည်း တိုးတက်မှုမရှိလျှင်၊ သွေးဖြူဥ သွေးမွှားဥများကို ဖိနှိပ်နိုင်မှု တိတိကျကျမရှိသေးလျှင် ဆေးကို5mg/kg နှုန်းအထိတိုးနိုင်ပါသည်။ acute lymphatic leukemia နှင့် လူကိုဆိုက်သွေးဖြူဥအရေအတွက်များသော လူနာတစ်ချို့တွင် တစ်ရက်ကို 2.5 mg/kg နှုန်းနှင့် ၁-၂ ပတ်ခန့်ပေးခြင်းက လူကိုဆိုက်များကို မြန်မြန်ကျစေပါသည်။
တစ်နေကုန်အတွက်ဆေးကို တစ်ကြိမ်သာပေးရမည်။ ဆေးပမာဏကို 25 mg ဆပွားကိန်းအနေနှင့် တွက်ချက်လေ့ရှိ၏။
ထိန်းညှိပမာဏ: သွေးဆဲလ်များအား ကောင်းကောင်းဖိနှိပ်ထားနိုင်သွားပါက ထိန်းညှိပမာဏကိုစဉ်းစားရန်လိုပါပြီ။ ပုံမှန် ထိန်းညှိပမာဏမှာ တစ်ရက်ကို 1.5 to 2.5 mg/kg နှုန်းနှင့် တစ်ကြိမ်တည်းသောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ပြန်ပြန်ဖြစ်တတ်သော acute leukemia အားထိန်းရာတွင် Mercaptopurine တစ်မျိုးတည်းသီးသန့်သုံးလေ့မရှိပါ။
Acute Lymphoblastic Leukemia အတွက် လူကြီးသုံးရန် ပုံမှန်ပမာဏ
Acute Crohn’s Disease အတွက် လူကြီးသုံးရန် ပုံမှန်ပမာဏ
သောက်ဆေး:တစ်ရက်လျှင် 1.0 to 1.5 mg/kg နှုန်း
Crohn’s Disease – Maintenanceအတွက် လူကြီးသုံးရန် ပုံမှန်ပမာဏ
Ulcerative Colitis – Maintenanceအတွက် လူကြီးသုံးရန် ပုံမှန်ပမာဏ
Inflammatory Bowel Diseaseအတွက် လူကြီးသုံးရန် ပုံမှန်ပမာဏ
ကျောက်ကပ်မကောင်းသူများတွင် ဆေးနှင့် မက်တာဘိုလိုက်များကို ကောင်းကောင်းမစွန့်နိုင်သောကြောင့် ပမာဏနည်းနည်းနှင့်စရန်သာ အကြံပြုပါသည်။
အသည်းလုပ်ငန်းမကောင်းသူများတွင် ဆေးပမာဏကို လျော့ပေးရန် စဉ်းစားရမည်။
လူနာမှဒဏ်ခံနိုင်သော ဆေးပမာဏနှင့် အာနိသင်မှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မတူနိုင်သောကြောင့် အဆိပ်သင့်မဖြစ်စေပဲ အာနိသင်ပြသောပမာဏကို ကောင်းကောင်းချိန်တွယ်နိုင်ရန် အရေးကြီး၏။
Allopurinol ပါတွဲပေးနေပါက Mercaptopurine ၏ ပမာဏကို ပုံမှန်၏သုံးပုံတစ်ပုံ သို့မဟုတ် လေးပုံတစ်ပုံသာ ပေးသင့်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆေးတွင် အချိန်ယူရသော အာနိသင်တစ်ခုရှိနေနိုင်ပြီး လူကိုဆိုက်များ၊ သွေးမွှားဥများမြန်မြန်နှင့်များများကျသွားသည်နှင့် တန်းပြီးရပ်ပစ်ရပါမည်။ ထို့နောက်တွင် လူကိုဆိုက်နှင့် သွေးမွှားဥပမာဏမှာ ၂ ရက် ၃ ရက်လောက် ငြိမ်နေလျှင် သို့မဟုတ် မြင့်လာလျှင် ဆေးကိုပြန်ဆက်ပေးနိုင်ပါသည်။
အဖြစ်များဆုံးသော အဆိပ်သင့်သည့်လက္ခဏာမှာ myelosuppression ဖြစ်ပြီး သွေးဆဲလ်များအားလုံးကို ကျသွားစေနိုင်ပါသည်။ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီအား ဖိနှိပ်ရန်အတွက်သုံးခြင်းမဟုတ်ပါက သွေးဆဲလ်အရည်အတွက်များ မြန်မြန်နှင့်များများကျသွားသည်နှင့် ဆေးကိုရပ်လိုက်သင့်ပါသည်။
Mercaptopurine မှာ အားပြင်းသောဆေးဖြစ်သည်။
acute lymphatic leukemia မှန် သေချာမှသာ ဆေးကိုအသုံးပြုသင်ပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Mercaptopurine (မာကပ်တိုပျူရင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Intestinal Arterial Insufficiency အတွက် ကလေးသုံးရန် ပုံမှန်ပမာဏ
Acute Lymphoblastic Leukemia အတွက် ကလေးသုံးရန် ပုံမှန်ပမာဏ
Mercaptopurine (မာကပ်တိုပျူရင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Mercaptopurine ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Mercaptopurine ကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါက လွတ်သွားသောအကြိမ်ကိုကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုး မလုပ်ပါနှင့်။
Mercaptopurine Dosage. https://www.drugs.com/dosage/mercaptopurine.html. Accessed March 15, 2018.
Mercaptopurine. https://www.webmd.com/drugs/2/drug-5903/mercaptopurine-oral/details. Accessed March 15, 2018.